Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 22 Mey, 2013, 19:09 GMT 22:09 SGA
Nin ayaa lagu dilay faas, laba kalena waxaa lagu toogtay xaafadda Woolwich ee Koofurta Barri ee London. Dowladda Britain ayaa lagu soo waramay in ay weerarkaa u tixgalineyso weerar agagixiso.
90 qof ayaa lagu xukumay puntlandMaqal04:22
Maxkamad ku taal maamul-goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya ayaa dad badan oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali ku xukuntay ganaax kala duwan.
Ciidammada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ah ka wada hawlgallo lagu hagaajinayo ammaanka magaalada.
Doodda Miisaaniyadda SoomaaliyaMaqal03:54
Suuriya: Dowladda oo weerartay Qusair
Somaliland: Xuska 18ka MayMaqal04:51
Machadka Sheekh ee Caafimaad Xoolaha oo Lagu Wareejinayo IGADD
Ururka Midowga Yurub ayaa ku wareejinaya urur goboleedka IGADD maamulka Machadka Caafimaadka iyo dareyeelka xoolaha ee Sheekh, machadkaasi oo ilaa heer jaamicadeed la gaadhsiinayo barnaamijkiisa waxbarasho.
Guurka Sacuudiga iyo qaxootiga SuuriyaMaqal05:10
Iskuul laga furay MuqdishoMaqal03:31
Xasan Sheekh: "Siyaasadeydu waa Somalia oo mid ah"Maqal04:31
WararNin lagu dilay xaafadda Woolich ee London
Aqoon GuudGuurka Sacuudiga iyo qaxootiga SuuriyaMaqal05:10
Click iyo toddobaadkanDaawo01:42
Adeegyo cusub oo ku soo kordhaya tiknoolojiyada internet-ka iyo moobillada
Sawirro dabaaldega 18ka May
WararkaAasiyaAfrikaArgagixisoBariga DhexeMaqalMuuqaalSawirroSiyaasaddaHalkaan ka baar canaawiinta oo dhan A-Z